Ataovy telo heny ny fifamoivoizan'ny bilaoginao amin'ireo mpitsidika manan-danja | Martech Zone
Alarobia, Jona 1, 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Douglas Karr
Bob Burchfield dia mpinamana efa ela ary iray amin'ireo tovolahy tsara indrindra eto Indianapolis. Tonga amin'ny hetsika rehetra isam-paritra izy ary manana ny feno indrindra Alimanakan'ny hetsika Indianapolis ao amin'ny faritra manodidina an'iIndy.com. Bob dia nametraka ahy ity fanamarihana androany:
Te hizara aminao momba ny tetikasa famahanam-bilaogy kely iray izay nanjary iray volana lasa izay aho. Ny iray amin'ireo CVB (biraon'ny fivoriambe sy mpitsidika) dia nanontany raha afaka manoratra bilaogy ho an'ny vahiny aho Bilaogy manodidinaIndy.com. Navoakako isan'andro (sy taty aoriana isan-kerinandro) hatramin'ny 2008, saingy tsy nampiasa azy io na inona na inona ankoatry ny lisitry ny zavatra 10 tokony hatao any Indianapolis amin'ny herinandro ho avy. Ka rehefa azoko io fangatahana io dia nieritreritra aho hoe maninona raha sokafana amin'ny CVBs rehetra sy ny toerana anaovana izany? Ka nandefa fanasana tany amin'ny 100 tamin'izy ireo aho tamin'ny alàlan'ny mailaka. Nanomboka tonga tao anatin'ny indray alina ireo lahatsoratra. Nanomboka namoaka iray isan'andro aho, isa-maraina tamin'ny 6 maraina, ny 16 Mey.
Eny ary ......... ..
Ho an'ny herinandron'ny 16-22 Mey, nitombo 77.5% ny fifamoivoizana tao amin'ny bilaogy tamin'ny herinandro lasa teo. Ho an'ny herinandron'ny 23-29 Mey TRIPLE ny fifamoivoizana ny herinandro teo. Fifamoivoizana tamin'ny Mey 2011 dia avo 128.6% noho ny Mey 2010. Ny bilaogin'ny mpitsidika ny 30 Mey dia nametraka a Iray andro ny firaketana ny fifamoivoizana an-tranonkala, nahatratra 79.1% avy amin'ny havoana iray andro teo aloha.
Ny zavatra tena mahaliana ahy dia raha maka keyphrase isaky ny bilaogy aho ary manao fikarohana ao amin'ny Google dia miseho amin'ny pejy voalohany amin'ny valin'ny karoka Google ao anatin'ny adiny iray aorian'ny nametrahana azy.
Ny aingam-panahy tamin'ity ezaka ity dia avy amin'ny famakiana Fitorahana bilaogy ho an'ny Dummies. Noho izany dia manoratra fotsiny aho milaza hoe "misaotra" noho ny fanampiana, torohevitra, fanohanana ary fampahalalana tsara izay nozarainao tamiko (sy ireo mpianatro) hatramin'ny nihaonantsika voalohany tany Southside Smoosiers (mbola malahelo an'ireo fivoriana ireo aho Ny amboaram-boanjo).
Bob Burchfield, Tonian-dahatsoratra
Misaotra an'i Bob nanokana fotoana hanoratana ahy. Izany no antony nanoratanay ny boky! Tianay ny olona hampitombo ny fahefany sy ny fifandraisany amin'ny Internet miaraka amin'ny paikady azo refesina azo refesina. Ireny karazana mailaka ireny no manome tsiky ny tavako ary manome hery ahy!
Ny Tetikasa Domino: Matokia ny fanambinao amin'ny fanoratana
Jun 1, 2011 ao amin'ny 10: 18 PM
Mila mamaky ny bokinao aho! Vaovao amin'ny fanaovana bilaogy aho ary mila ny fanampiana rehetra mety ho azoko!
Jun 1, 2011 ao amin'ny 10: 22 PM
Aza hadino ny misoratra anarana amin'ny alàlan'ny mailakao. Mizara torohevitra isan-kerinandro izahay!
Jun 1, 2011 ao amin'ny 10: 23 PM
Mila mamaky ny bokinao aho! Vaovao amin'ny fanaovana bilaogy aho.
Jun 1, 2011 ao amin'ny 11: 14 PM
Mieritreritra aho fa mila mamaky azy io indray.
2 Jun 2011 amin'ny 12:38 AM
Valerie, superstar ianao!